वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको कोरोना संक्रमित कैदीको घटना के हो ? - AP Khabar
एपी खबर२०७७ आश्विन ७, बुधबार (१ महिना अघि) ५७ पाठक संख्या
काठमाडौँ : खुलामञ्चमा भोकाहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाईरहेको ‘हन्ड्रेड समूह’मा सक्रिय बब्लु गुप्ताले मंगलबार करिब साढे दस बजेतिर वीर अस्पताल अघिबाट फेसबुकमा लाइभ सुरु गरे । उनको लाइभमा बुटवल घर बताउने एक महिला, उनकी छोरी र अन्य आफन्तहरुको आक्रोश र रोदन कैद भइरहेको थियो ।
सोही भिडियो लाइभमा रामकी छोरीले उनीहरुलाई मृतकको शव हेर्न नदिएपछि जबरजस्ती झ्यालबाट घोचो छिराएर शव ढाकिएको कपडा हटाएर भिडियो खिचेको र उक्त भिडियोमा प्रष्टसँग बाबुको हत्या गरिएको प्रमाणहरु देखिएको दाबी गरिरहेकी थिइन् ।
छोरीसँगै देखिएका एक वयस्क व्यक्तिले मृतकको दुवै आँखा निकालिएको, घाँटी र हातमा पोलेको दाग देखिएकाले हत्याको घटना लुकाउन अस्पताल र जेल प्रशासनले कोरोनाको बहाना बनाएको बताइरहेका देखिन्छन् ।
यो समाचार तयार पर्दासम्म बब्लुको यो फेसबुक लाइभ ७ घन्टामै ४ हजार ७ सय पटक सेयर भएको देखिन्छ भने त्यसमा १ हजार ३ सयले कमेन्ट गरेको देखिन्छ । बब्लुले गरेको लाइभलाई अन्य कैयौं फेसबुक पेजले पनि सेयर गरेका छन् ।
लाइभ भिडियोको फुटेज काटेर दर्जनौंले टिकटकमा हालेका छन् । जसमध्ये मंगलबार साँझसम्म यो घटनाबारे विक्रम श्रेष्ठको टिकटक अकाउन्टबाट तीन फरक फरक भिडियो पोस्ट भएको देखिन्छ ।
जसमध्ये पहिलो भिडियो ८८ हजार २ जनाले हेरेका छन् भने त्यसमा ७ हजार २ सय ८४ ले लभ रियाक्ट, ८ सय ६९ ले शेयर र २ सय ६९ वटा कमेन्टहरु आएका छन् ।
रामलखन जैसवालको मृत्यु षड्यन्त्रपुर्वक भएको, परिवारलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको र हत्यापछि भएको मृत्यु लुकाउन कोरोना भनिएको भन्ने खालका अन्य दर्जनौं भिडियो सामाग्रीहरु पनि युट्युबमा देखिन्छ ।
यही घटनाबारे ओटीभी नामक नामक युट्युब च्यानलले ‘ओ माई गड’ भन्दै ‘कोरोना अस्पतालमा जिउँदै मान्छे मारेर आँखा चोरी ! सडकमै छोरी र श्रीमतीको रुवाबासी, तोडफोड’ शीर्षकमा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ ।
जसलाई अपलोड गरिएको ५ घण्टामा १६ हजार ७ सयले हेरेका छन् । त्यस्तै अनलाइन हरपल नामक युट्युब च्यानलले यही घटनाको भिडियो ‘वीर हस्पिटलमा घट्यो यस्तो काण्ड, चले रुवाबासी, कोरोनाको नाममा आँखा र किडनीको व्यापार ?’ शीर्षकमा भिडियो पोस्ट गरेको छ ।
जसलाई अपलोड गरिएको ६ घन्टामा २८ हजारले हेरेका छन् । यही विषयमा योहो टिभीले पोष्ट गरेको भिडियो ३ घण्टामा ३० हजारले हेरेका छन् । यो युट्युबले ‘मृतकको आँखा गायब’ भन्ने शीर्षकलाई थम्बनेल बनाएको छ ।
मंगलबार साँझसम्म यो घटनाबारे दर्जनौं युट्युब च्यानलले सनसनीपूर्ण थम्बनेलसहितको भिडियो बनाएका छन् । जसको लाखौं भ्युअर्स देखिन्छन् ।
यो घटनाबारे पहिलो भिडियो लाइभ गरेका बब्लुले आफूहरुले खुलामञ्चमा खाना बाढ्ने बेलामा केही मान्छेले फोन गरेर बोलाएपछि आफू त्यहाँ पुगेको र घटनाबारे प्रहरीलाई खबर गरी लाइभ गरिदिएको बताए ।
परिवारका मान्छेले रामलखनलाई कुनै पनि रोग नलागेको दाबी गरेको र मृतकलाई कोरोना नै लागेको भएका जेलभीत्रका अरु कैदीलाई किन कोरोना नलागेको भनेर प्रश्न गरेको सुनाए । बब्लुले दिएको मृतकको परिवारका सदस्यको फोनमा बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सर्म्पक हुन सकेन ।
केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा थुनामा रहेका जैसवाल साढे आठ वर्षयता कारगारमा रहेको बताए । उनले जैसवालको साढे ११ वर्ष कैद भुक्तान बँकी रहेको समयमा शनिबार राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा श्वासप्रश्वासमा गाह्रो भएपछि कारागारभित्रैको अस्पतालमा लगिएको बताए ।
जेलर बाँस्कोटाका अनुसार अस्पतालले थप उपचारका निम्ति सिफारिस गरिएपछि राति नै वीर अस्पताल पुर्‍याएको तर, अस्पतालले राति १० बजेर ५५ मिनेटमा बिरामीको मृत्यु भएको सूचना दिएको जानकारी दिए ।
उनले मृतक जैसवाल दीर्घरोगी हुनुका साथै पार्किन्सन्सका बिरामी रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार जैसवालको मृत्युपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट सोमबार राति आएको र त्यसमा मृतकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बुटवलबाट काठमाडौं आएका परिवारले मृतकको शव देखेपछि त्यसबारे प्रश्न गर्न बिहान आफू कहाँ आएको पनि जेलर बाँस्कोटाले बताए । उनले भने, ‘परिवारका मान्छेले मृत्युबारे शंका गरेपछि मैले जेल भित्रको र अस्पताल लैजाँदाको सबै सीसीटिभी फुटेज झिकाएर हेरें ।
तर, त्यसमा परिवारका सदस्यले भनेजस्तो केही देखिएन ।’ मृतकका परिवारले शवमा निलडाम देखिएको, आँखा झिकिएको र घाँटीमा दाग भएकाले हत्या भएको शंका आफूसँग व्यक्त गरेको जेलर बाँस्कोटाले बताए ।
वीर अस्पतालका निर्देशक केदारप्रसाद सेन्चुरीले भने शनिबार राति ल्याउँदा नै बिरामीको मृत्यु भइसकेको र कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट नआउन्जेलका लागि शवलाई अस्पतालको शवघरमा राखिएको बताए ।
वीर अस्पतालको शव घरमा फ्रिज नभएकाले अस्पतालले बन्द कोठामा शवलाई खुला नै राखेको थियो । कोरोना संक्रमण सुरु हुनुअघिसम्म वीरले मृतकको शव राख्नै पर्ने भए टिचिङ अस्पतालको शव घरको फ्रिजमा राख्न पठाउँथ्यो ।
शव पोष्टमार्टमका लागि मंगलबार साँझ टिचिङ अस्पताल लगिएको मृतक रामलखनका भतिजा शिवजैसवालले जानकारी दिएका छन् ।
मंगलबार साँझ वीर अस्पतालका निर्देशक सेन्चुरीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ‘केही सञ्चारमाध्यममा आँखा निकालिएको, चोटपटक लागेको, घाँटी काटिएकोजस्ता भ्रामक समाचारहरु सम्प्रेषण भएकोमा उक्त समाचारमा यथार्थ नभएको जानकारी गराइन्छ’ भनेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा जनकराज सापकोटा र फातिमा बानुले लेखेकी छन् ।